Kulula ukukhula i- aragonite crystals ! Ezi kristali ezintle zifuna iviniga neliwa. Ukukhula kwamakristali kuyindlela ejabulisayo yokufunda malunga ne-geology kunye ne-chemistry.
Izinto zokuvelisa i-Aragonite Crystals
Udinga kuphela izinto ezimbini zeprojekthi:
I-Dolomite iyimigodi eqhelekileyo. Yisiseko sobumba base dolomite, esifanele sisebenze ngamakristal, kodwa ukuba uyakhula edwaleni ufumana i-specimen enhle.
Ukuba usebenzisa udongwe, unokufuna ukufaka elinye ilitye okanye isiponji njengesiseko okanye isiseko sokuxhasa ukukhula kwekristal. Unokufumana amatye kwivenkile okanye kwi-intanethi okanye ungadlala i-rockhound uze uqokelele.
Indlela Yokukhulisa Amakristali
Le ngenye yeeprojekthi ezikhulayo zekristal. Ngokwenene, uvele udibanise ilitye kwiviniga. Nangona kunjalo, zikho iingcebiso ezimbalwa zeekristal ezifanelekileyo:
Ukuba ilitye lakho lingcolile, lihlambulule kwaye liye lome.
Beka idwala kwisitya esincinci. Ngokufanelekileyo, kuya kuba mkhulu kuneliwa, ngoko akufanele usebenzise iviniga eninzi. Kulungile ukuba ilitye likhuphe phezulu kwinqongo.
Thela iviniga kwienxa yeliwa. Qinisekisa ukuba ushiya indawo evelele phezulu. Iikristali ziya kuqala ukukhula kumgca wamanzi.
Njengoko iviniga igxuma , i-aragonite crystals iza kuqala ukukhula. Uza kuqala ukubona amakhristal yokuqala ngosuku. Ngokuxhomekeka kwimiqondo yokushisa kunye nomswakama, kufuneka uqale ukubona ukukhula okulungileyo malunga neentsuku ezingama-5. Kungathatha iiveki ezi-2 ukuba iviniga igxumeke ngokupheleleyo kwaye ivelise iikristali zikhulu kunokwenzeka.
Ungasusa ilitye kumanzi xa unelisekile ngokubonakala kweekristal. Ziphathe ngokucophelela, njengoko ziya kuba ziphazamisekile kwaye zibuthathaka.
I-Dolomite iyimithombo yamaminerali esetyenziselwa ukukhula i-aragonite crystals. I-Dolomite iyidwala elincinci elitholakala rhoqo kumanxwemeni asendulo.
I-Aragonite yindlela ye-calcium carbonate. I-Aragonite itholakala kwimithombo yamaminerali ashushu nakwezinye iindawo. Enye i-calcium carbonate amaminerali yi-calcite.
I-Aragonite ngezinye iinkqubo idibanisa kwi-calcite. I-Aragonite kunye ne-calcite crystals ziyikhemikhali, kodwa i-aragonite iifom i-orthorhombic crystals, ngelixa i-calcite ibonisa iikristal eziqhelekileyo. Iiparele nonina weeparele zizinye iindlela ze-calcium carbonate.
Indlela yokukhipha iDNA
Ukulimala okuqhelekileyo kweBhola yeBhola kunye nento oyenzayo xa kuvela kuwe
UCwangciso loLwimi lithetha ntoni?
I-Sith - Basics ye-Order ye-Dark Side
Ukunyanzeliswa kwePointress Point Inkcazo